Samsung Galaxy A50: famaritana, vidiny ary famoahana | Androidsis
Samsung dia manavao ny laharan'ny telefaoniny rehetra izao. Ny orinasa koreana dia miasa indrindra amin'ny fanavaozana ny elanelam-potoana misy azy mba hahafahany mifaninana kokoa amin'ny tsena. Ny iray amin'ireo fizarana tadiavin'ny orinasa havaozina tanteraka dia ny Galaxy A. Amin'izao fotoana izao dia efa manana ny mpikambana vaovao amin'ity faritra ity isika, ny Galaxy A50. Efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Tao anatin'izay herinandro izay dia niainantsika izany maro ny fivoahana momba an'io Samsung Galaxy A50 io, avy amin'ny bateria avy amin'ny telefaona na ny toerana misy sensor mitovy amin'izany. Ary farany, efa ofisialy ilay fitaovana, ka fantatsika ny momba azy rehetra. Inona no azontsika antenaina amin'ity antenantenany ity?
Miatrika ambaratonga afovoany isika tonga miaraka amin'ny fakan-tsary triple aoriana, ankoatry ny fampidirana ny fantsom-panaovana rantsan-tànana eo ambanin'ny efijery, araka ny noresahina tato anatin'ireto herinandro ireto. Tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo maodely nantsoina hanjakazakana ity fizarana afovoany ity amin'ny Android amin'ity taona ity.
1 Famaritana Galaxy A50
Famaritana Galaxy A50
Ity Galaxy A50 dia ohatra tsara amin'ny fanavaozana ny mid-range izay hitantsika ao amin'ny Samsung. Ny marika Koreana indray dia mampiditra notch amin'ny endrika rano indray mitete amin'ireo findainy. Ankoatry ny fananana fakan-tsary any aoriana, zavatra izay saika takian'ny mpanjifa amin'ity elanelam-potoana ity. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
Famaritana teknika Samsung Galaxy A50
modely Galaxy A50
Operating System Tsy voamarina
efijery Super AMOLED 6.4 Inch Full HD + 1080 × 2340 teboka
processeur Vitsy valo miaraka amin'ny core 4 amin'ny 2.3 GHz ary 4 cores amin'ny 1.7 GHz
Tahiry anatiny 64/128 GB (azo ovaina hatramin'ny 512 GB miaraka amin'ny microSD)
Fakan-tsary aoriana 25 MP AF f / 1.7 + 5 MP FF f / 2.2 + 8 MP FF f / 2.2
Fakan-tsary aloha MP 25 miaraka amin'ny f / 2.0
Fitaovana hafa Mpamaky ny rantsantanana tafiditra ao amin'ny efijery Samsung Pay Bixby Vision Bixby Voice Bixby Home Bixby Reminder
bateria 4.000 mAh miaraka amina fiampangana haingana
lafiny 158.5 × 74.7 × 7.7 mm
Noho izany, hitantsika fa misy singa sasany tonga amin'ity finday ity izay tsy nampidirin'ny marika Koreana ho eo antenantenany, tsy toy ny marika hafa. Heveriny fa ny fahatongavan'ilay marika amin'ny marika, ny Galaxy M dia manana azy, na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy fantatra raha toa ka hapetraka manerantany io faritra io. Izahay koa dia manana ny fantsom-panafody eo ambanin'ny efijery amin'ity Galaxy A50 ity.
Azontsika atao ihany koa ny mahita fa ny orinasa dia manolo-tena amin'ny fakantsary marobe eo afovoany. Efa nanana modely miaraka amin'ny fakantsary telo sy efatra isika ao anatin'ireo volana lasa izay. Raha izany Galaxy A50 dia mamela antsika amina fakantsary aoriana telo, izay tsy isalasalana fa mampanantena hanome fahombiazana tsara ho an'ireo mpampiasa. Ary koa ny fakan-tsary voalohany dia mampanantena fa hanatitra tsara miaraka amin'ny MP-25 azy.
Tonga miaraka amin'ny bateria lehibe 4.000 mAh, izay tokony hanome fahaleovan-tena tsara ho an'ny mpampiasa. Amin'izao fotoana izao dia tsy manana ny antsipiriany rehetra momba ilay fitaovana izahay. Tsy fantatray ny dikan'ny Android anananao ary tsy ampy angon-drakitra momba ny fifandraisany izahay. Fa tokony ho fantatsika tsy ho ela.
Amin'ny daty fanombohana an'ity Galaxy A50 ity dia tsy manana angona izahay. Fantatray fa hisy kinova maromaro, satria manana RAM 4 sy 6 GB izahay ary fitahirizana 64 sy 128 GB. Fa na ny vidiny na ny daty famoahana dia tsy voalaza momba ny kinova an'io midadasika Samsung vaovao io.
Ny hany fantatsika dia hamoaka fotsy, mainty, manga ary haran-dranomasina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Galaxy A50: ny afovoany vaovao an'ny Samsung
Galaxy Fold vs Huawei Mate X: hevitra roa samy hafa ho an'ny tanjona iray